GNOME 40, zita idzva kuti risazovhiringidzwa neGTK4.0 | Linux Vakapindwa muropa
Nguva shoma dzakapfuura takadzokorora kubva pakuburitswa kweGNOME 3.38, yazvino vhezheni yakagadzika yedesktop inozivikanwa kwazvo muLinux nyika. Kusvikira maawa mashoma apfuura, isu tese takafunga kuti inotevera vhezheni ichave v3.40, muchokwadi tinoburitsa chinyorwa mazuva matatu apfuura chakataura nezvehuwandu hwacho, asi isu tanga takanganisa. Kana kuti tive vakatendeka kuchokwadi, hazvisi kuti isu tanga takanganisa, ndezvekuti chirongwa chakachinja pfungwa uye chakasarudza kuti inotevera vhezheni GNOME 40.
Kusvetuka kwenhamba kunotora kutarisisa kwakawanda, kunyanya nekuti kweanoda kusvika makore gumi, pakaburitswa GNOME 3.0, vanga vachiwedzera poindi kana manhamba kusvika kusvika 38 nezuro, asi chirongwa ichi chine zvikonzero zvekuchinja manhamba, mamwe mune iwo kuti tinogona kubvumirana kana kupokana nazvo. Nenzira imwechete iyo Unity8 yakachinja zita rekuti Lomiri kuti zvive nyore, GNOME 40 ichagamuchira iyo nyowani nyowani kudzivirira kusavhiringidzika neGTK 4.0 iyo yatove mukusimudzira.
GNOME 40, uye kwete 3.40, kwete kuvhiringidzwa neGTK 4.0
Aya ndiwo marondedzerero akaita Emmanuelle Bassi mukati mukova pane iyo GNOME foramu, kwaakatsanangurawo kuti ndedzipi nhamba dzavanoshandisa kubva zvino zvichienda mberi. Kutanga, shanduro dzekuvandudza dzinodaidzwa kuti 40.alpha, 40.beta, uye 40.rc. Kana kuburitswa kwakagadzikana kwasvika, nhamba dzichawedzerwa mushure menguva, saka yekutanga GNOME 40.0 kuburitswa v40.1 ichatevera, v40.2 zvichingodaro. Zvakare, shanduko zvakare inoreva kuti matekinoroji achaunzwa ayo ari kure neaya akaunzwa makore gumi apfuura.
GNOME 40 ichauya yakagadzikana vhezheni munaKurume 2021 Uye, kana ikaenderera sepakutanga, uye izvo hazvifanirwe kuchinja, pachave nepfungwa kana kugadzirisa kugadzirisa mwedzi wega, saka GNOME 40.1 yaizosvika muna Kubvumbi uye 40.2 muna Chivabvu. GNOME 41 ichave yatoburitswa muna Gumiguru 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40, inotevera inotevera yekuvandudza inotumidzwa zita kunzvenga nyonganiso